Mabaadi'da Gestalt ee naqshadeynta garaafyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Dunida naqshadeynta iyo farshaxanka, waxaa aad muhiim u ah in la tixgeliyo cilmi-nafsiga, mar haddii aynnu ku gudbin karno shucuurta, kuna qancin karno dadweynaha, iyadoo ay u dheer tahay fahamka sida ay u fahmaan farriinta loo soo diray.
Maqaalkan, waxaan uga hadli doonaa Mabaadi'da Gestalt ee naqshadeynta garaafka, iyo sida ay u yihiin qalab faa'iido leh si loo fahmo sida aragga muuqaalku u shaqeeyo, iyo sababta qaar ka mid ah walxaha muuqaalku u shaqeeyaan si uun ama si kale.
Waan ogaan doonaa waxa ay yihiin sharciyo kala duwan oo ku xeeran Gestalt, waxaanan ku dari doonaa tusaalayaal iyaga ka mid ah adduunka naqshadeynta iyo xayeysiinta.
1 Waa maxay Gestalt?
2 Sharciyada Gestalt
2.1 mabda'a isu ekaanshaha
2.2 Mabda'a sii wadida
2.3 mabda'a xidhitaanka
2.4 mabda'a u dhawaanshaha
2.5 Mabda'a sawirka iyo dhulka
2.6 mabda'a summaysan
Waa maxay Gestalt?
Aragtida Gestalt ama cilmu-nafsiga qaabka, waa isbeddel maskaxeed oo ka soo baxay Jarmalka qiyaastii 1920, iyo in mabaadi'deedu waxay ku salaysan yihiin aragtida aragtida aragtida. Mabaadi'da ay Gestalt ururiso waxay kobceen muddo ka dib iyada oo ay mahad naqayaan cilmi-baarayaal kala duwan.
Dunida naqshadeynta, waa wax aad u badan in la tixgeliyo lixda mabaadi'da aasaasiga ah ee aragtida muuqaalka in Gestalt ay ina soo bandhigto marka nashqadeynta, maadaama iyaga aan ku abuuri karno naqshado ka qayb qaata daawadayaasha.
Waxaan diiradda saari doonaa lix mabda'a oo inta badan loo isticmaalo adduunka naqshadeynta iyo inaan aqoonsan doono oo aan si dhakhso ah u fahmi doono.
mabda'a isu ekaanshaha
Mabda'a isku midka ah ayaa soo bixi doona marka Walxaha la arko waxay u muuqdaan kuwo isku mid ah, tani waxay u horseedaysaa daawadayaasha inuu u arko inay tahay mid isku dheelitiran oo dhan.
Walaxyadu waxay wadaagaan xubno muuqaal ah sida midabka, qaabka, cabbirka, iwm. Sida weyn ee isu ekaanshahan, ayaa inta badan isku xiran oo dhan waa.
Mabda'aani wuxuu ku yaalaa sawirkii hore ee Mulberry, guriga moodada maqaarka ee raaxada. Astaanta waxaa dhiirigelinaya geedaha buskudka ah ee abuuraha summadadu ku arkay isaga oo dugsiga u sii socda. Diirada saarista sawirkaas waa meesha aan ka arki karno in mabda'aani u muuqdo tan iyo markii ay isticmaalaan qaababka aasaasiga ah ee tilmaamaya geedka sare ee geedka.
Mabda'an, waa isha muuqaal ahaan abuurta sii wadista xariiqda, inta badan xariiqyada qalloocan, canaasiirtan waxaa loo arkaa si xiriir la leh inkasta oo uu jiro jabin khadkaas ah.
Naqshadeynta, mabda'akan waxaa loo isticmaali karaa in lagu hago aragtideena iyada oo la adeegsanayo walxaha ilmaha. Marka aan diirada saarno araggeena, waxaan indhaheena u dhaqaaqnaa jihada noo calaamadsan.
Tusaalaha cad ee mabda'aani waa astaanta Coca Cola, oo aan ka arki karno in C-ga ugu horreeya uu yahay midka calaamadeynaya dariiqa ay tahay in ay indhaheennu maro, sidaas oo kale waxay ku dhacdaa caasimadda labaad ee C.
Mabda'a xidhitaanku wuxuu dhacaa marka sawirku ma dhamaystirna ama si liidata ayuu u xidhan yahay, waana maskaxdeena ta xirta meelahaas markaad gartaan. Qaababka xiran ayaa loo arkaa inay yihiin qaabab xasiloon, waana sababta maskaxdeennu ay u jeceshahay inay dhammaystirto sawirka.
Waa farsamo aad looga isticmaalo dunida fanka mid ka mid ah hormoodkeeda ugu waa wayn waa fannaanka caanka ah ee Banksy. Shaqadan uu sameeyay Banksy, wuxuu isticmaalaa mabda'a xiritaanka si uu u abuuro sawirka gabadha iyo buufinta, inkastoo qaabka labada walxood aan si buuxda loo xirin, waa maskaxdeenna taas oo sameysa.
Waxaan sidoo kale ku arki karnaa astaanta Champions League, maskaxdeena ayaa mas'uul ka ah xiritaanka sawirka iyo abuurista sawirka kubbadda.
mabda'a u dhawaanshaha
Mabda'aani wuxuu ku salaysan yahay aragtida ah canaasiirta ku yaal meel dhow waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo loo arko inay yihiin go'an iyo in la kala saaro, oo la iska soociyo inta kale. Urur kooxeed ayaa ka dhex abuurma walxahan oo kale.
Si ururkaas kooxdu u jiro, walxaha waa inay sifooyin isku mid ah wadaagaan, sida qaabka, cabbirka, midabka, qaabka, iyo dhinacyo kale oo muuqaal ah.
Tusaalooyinka ugu cad cad ee aan mabda'aasi ku ilaalin karno waxa ka mid ah summada Unilever, taas oo aynu ku arki karno in canaasiirta ka samaysan sawirkeedu ay wadaagaan dhinacyada muuqaalka ah sida cabbirka, midabka iyo dhumucda.
Mabda'a sawirka iyo dhulka
Mabda'aani wuxuu soo dhaweynayaa fikradda Ishu waxay u janjeertaa inay aragto shay iyadoo go'doominaysa hareeraheeda, kala saaraysa walxaha ku xeeran.
Jaantusku wuxuu noqon lahaa cunsurka meel bannaan oo ka soocan curiyeyaasha intiisa kale, dhanka kale, asalku waa wax kasta oo aan jaantus ahayn. Indhahayagu waa kuwa raba inay arkaan shaxanka oo ka tagaan asalka gadaal.
Tusaalaha aan dhammaanteen aragnay waa sawirka aan ku arki karno laambad ka kooban laba weji oo muuqaal ah. Naqshadaynta garaafyada, waxaan inta badan ka heli karnaa mabda'an boodhadhka, sida kan hoose ee Noma Bar oo ay weheliso naqshadeeyaha Tanya Holbrook, ee IBM.
Mabda'ani wuxuu leeyahay taas walxaha muuqaalku waa in ay noqdaan kuwo habaysan oo siman, waa inaysan siin dareen khalkhal ama dheelitir la'aan, maadaama daawadayaasha aysan fahmi doonin fariinta aad rabto inaad gudbiso.
Astaanta nabada sida aynu maanta u naqaano, laakiin dhab ahaantii waxa loo abuuray calaamad muujinaysa hub ka dhigis nukliyeer ah, oo uu abuuray Gerald Holtom 1958-kii ayaa tusaale u ah sharciga sumadda.
Sidaad aragtay, Mabaadi'da Gestalt waxay aad uga jiraan adduunka naqshadeynta iyo farshaxanka. Nashqada si ay si sax ah u shaqeyso waa in la wada garto gabi ahaan, waa in lagu dhisaa iyada oo ku saleysan baahida qaataha.
Mabaadi'da Gestalt waa qalab aasaasi ah, maadaama ay ku caawinayaan diiradda saarista dareenka daawadayaasha iyo in la habeeyo qaybaha kala duwan ee muuqaalka si wax ku ool ah, taas oo keenta in daawadayaasha, marka la eego sawirkaas, si ay u kiciyaan dareenka, dareenka, xitaa hal-abuurkiisa.
Nashqadeeyayaasha ahaan, fikradda ugu weyn ee aan ku xisaabtameyno waa in ay muhiim tahay in la fahmo sida daawadayaasha, dadweynuhu, u arkaan walxaha, taasina waa sababta Gestalt ay faa'iido u leedahay in la falanqeeyo sida ay u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Mabaadi'da Gestalt ee naqshadeynta garaafyada